Abenzi base China YX-150 kunye nabathengisi | Yixin
Uchungechunge lwe-YX-150 sonke isikhundla somatshini wokuhambisa umbhobho ngokuzenzekelayo ulungele iipayipi ngaphezulu kwe-DN114mm kunye nobukhulu bodonga obungaphezulu kwe-5mm. Umbhobho ulungisiwe kwaye intloko ye-welding ikhasa ngokuzimeleyo ukuze ifumane ukuzenzekelayo kwayo yonke indawo (i-5G welding).
Inkqubo ye-welding isebenzisa ukusebenza kakuhle, ngexabiso eliphantsi i-CO2 i-welding welding, kwaye ucingo lwe-welding lunokuqiniswa okanye lube-cored cored. Intloko ye-welding inomtsalane kwimibhobho, kwaye iiparameter ze-welding zilungiswe kakuhle ngolawulo olukugcinwe ngesandla ukulawula intloko ye-welding ukuyifaka ngokuzenzekelayo kumbhobho.
Imibhobho esebenzayo: Iindidi ezahlukeneyo zemibhobho yokuhamba ende, imibhobho yokuhambisa ubushushu, imibhobho yangaphantsi komhlaba, inkqubo yombhobho njalo njalo, efanelekileyo ukuwelda kwindawo.
◆ Izinto zokuwelda: Isinyithi seCarbon, intsimbi engenasici, intsimbi ene-alloy, iqondo lobushushu eliphantsi
Weld I-weld esebenzayo: Ububanzi bepayipi ngaphezulu kwe-150mm, ubukhulu bodonga ngaphezulu kwe-8mm, imibhobho yodonga olujiyileyo inokudityaniswa ngokufanelekileyo kunye neekepusi.
◆ Intloko yeWelding: Kulula ukuyiphatha kunye nokuhamba, ukufakwa kwemagnethi esisigxina kwaye iyasebenza xa kusenzelwa iwelding ngokuzenzekelayo kwindawo leyo.
Ulawulo olukude: Misela kwaye ulawule iiparameter zokuwelda ezikude, kulula ukufunda nokusebenza ngokuxinana kwabasebenzi.
Umgangatho ophezulu: I-weld inembonakalo entle, akukho porosity, ukubandakanywa kwe-slag, ukungabikho kwe-fusion kunye nezinye izinto. Umgangatho we-welding ulungile, kwaye inqanaba elifanelekileyo lokufunyanwa kwesiphene se-ultrasonic lingaphezulu kwe-97%. Dibana neemfuno zovavanyo loxinzelelo okanye ifuthe, ukuqina, ukugoba kunye nokunye ukuhlolwa kweepropathi zoomatshini.
Ucingo lwe feeder
* Ucingo olusebenzayo: Ucingo oluQinisekileyo / iFlux-cored Wire
* Ifowuni ye-Flux-cored Wire Dia: 1.0mm / 1.2mm
Welding umpu Swing Speed 0-100 Ukuqhubeka nokulungisa
Welding umpu Swing Ububanzi Ukuqhubeka nokulungisa
Ixesha lasekhohlo Ukuqhubeka nokulungelelanisa
Ixesha elifanelekileyo Ukuqhubeka nokulungelelanisa
Pipe Ububanzi esebenzayo Ngaphezulu kwe-DN150mm
Ukusebenza Ubudonga Wall I-8mm-50mm
Umgca wokunyusa osebenzayo Zonke iintlobo zeewelds zecandelo lombhobho, ezinje ngeweld-pipe welds, pipe-elbow welds, pipe-flange welds, (ukuba kukho imfuneko, yamkela uqhagamshelo lombhobho wotshintsho lombhobho)
iwelding wire （φmm） I-1.0-1.2mm
Ubungakanani （L * W * H） Intloko Welding 222x140x120mm
Ubunzima （KG） Intloko ye-Welding 11kg
Ukudibanisa ngesandla Zenzekelayo Welding
Uqeqesho lweziphumo ezingcono
Egqithileyo YX-150 Pro